I-Opalite yabelana ngepropathi ezisisiseko zeekhemikhali njenge-opal-ividiyo
Thenga i-opalite yendalo kwivenkile yethu
I-opalite yendalo yabelana ngepropathi ezisisiseko zeekhemikhali njenge-opal. Yenziwe ngamanqwanqwa amancinci eesilicon dioksi aze axhoma enye kwenye ngendlela yegridi yephiramidi. Le gridi yeyona nto ivumela isiphumo sekati yekati ukuba ibonakaliswe xa ilitye linqunyulwa kwi-cabochon ephezulu. I-opalite yendalo ekubhekiswa kuyo njenge-opal eqhelekileyo ukuthintela ukuyiphazamisa kunye ne-opalite eyenziwe ngeglasi.
Ligama lokurhweba kwiglasi elenziwa ngabantu le-opalescent kunye neeopulants ezahlukeneyo zeopal. Amanye amagama ale mveliso yeglasi abandakanya i-argenon, i-opal yolwandle, inyanga ye-opal kunye namanye amagama afanayo. Ikwasetyenziselwa ukukhuthaza iintlobo ezingcolileyo zeentlobo ezahlukeneyo zeopal eqhelekileyo.
Xa iglasi ye-opalite ibekwe ngokuchasene nemvelaphi emnyama, ibonakala ngathi inombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Xa ibekwe ngokuchasene nemvelaphi yokukhanya, iba mhlophe ngombala omdaka ngombala o-orenji okanye opinki. Kuba kunjalo iglasi, ngamanye amaxesha inokuqulatha iibhubhu zomoya, isiphumo emva kokwenza inkqubo.
I-Opal yifom ye-hydrate ye-hydrate enobushushu. Umxholo wayo wamanzi ungasusela kwi-3 ukuya kwi-21% ngobunzima, kodwa uhlala uphakathi kwe-6 ne-10%. Ngenxa yohlobo lwayo lwe-amorphous, ihlelwe njenge-mineraloid, ngokungafaniyo neekristale zendlela ye-silica, ezihlelwe njengezimbiwa. Ibekwe kwiqondo lokushisa eliphantsi kwaye inokwenzeka kwimikhwa phantse naluphi na uhlobo lwamatye, ihlala ifumaneka nge-limonite, i-sandstone, i-rhyolite, i-marl, kunye ne-basalt.
Eli litye liyonyusa kwaye lixhaphaza amandla akho obuqu. Kukhulisa ukuzithemba nokuzithemba, kunye nokuphucula ukuzithemba kwakho. Isenokukunceda ekutyhilekeni amandla angaphakathi kuwe ukuchaza nokutyhila iimvakalelo zakho ezinzulu.